Inkwenkwezi yase-Indianapolis iphandwe emva kokubulawa kweNtatheli ka Mpozi Tolbert | Martech Zone
I-Indianapolis Star iphandwe emva kokubhubha kwentatheli kaMfoto Mpozi Tolbert
NgoLwesihlanu, Julayi 28, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ukufa kabuhlungu kuka-Mpozi Tolbert, 34, kuphandwa ngamagosa e-Indiana State ukumisela ukuba akukho nyhashwa na kwi-OSHA.
Andizange ndadibana noMnu Tolbert ngelixa ndisebenza e -The Star, kodwa ndandikwilifti amatyeli ambalwa nale ngxilimbela ethambileyo. Ndikhumbula ii-dreadlocks zakhe zaziza kuthatha isiqingatha sekheshi! Wonke umntu ovela kwigumbi leendaba wayeza kuncuma athi molo xa ekufutshane. Ndandifundile ukuba uMpozi wayesaziwa ngokugcina ukutya naye ukondla abantu abangenamakhaya. Ukuba wenza uphando kwi-Intanethi uyabona ukuba wayenetalente kangakanani.
Iinkcukacha ezichanekileyo zokusweleka kukaMpozi kubonakala ngathi ziyazidlalela kwibhlogosphere endaweni yegumbi leendaba. URuth HolladayOwayesele eyintatheli neSolezwe, ebesoloko ebhloga rhoqo malunga nokusweleka kukaMpozi kwaye uyigxeka kakhulu iThe Star. Ukudibana nabasebenzi abaninzi abaphezulu be-Star, ndingatsho ukuba ndiqinisekile ukuba bonke babuhlungu kukusweleka kuka Mnu Tolbert. Kuyenzeka ukuba ugxeke umbutho kaGannett kunye neenkqubo zokhuseleko, kodwa andiqondi kufanelekile ukuhlasela abantu abalungileyo abasebenza apho.
Imfuno ethile yabasebenzi yokubiza ukhuseleko endaweni ye-911 yingcambu yengxabano. Emva kokuba ndifundiswe ngumqeshwa weThe Star, ndinokuxelela ukuba lo yayingumgaqo ophikisayo owawuxutyushwa ixesha elide. Ukufikelela kwilifti kubonakala kuyingxaki. Isakhiwo sidala kakhulu, kungoko kukho iilifti ezi-2 kuphela ezinokufikeleleka ngabo bonke abasebenzi- kwaye bobabini bavalelwe ngokufanelekileyo. Kule meko, kubonakala ngathi abahlanguli baphambukisiwe bekwilifti yokungena yomqeshwa, into enokuba ichebe imizuzu yokuzama kwabo ukugcina uMnu.
Nokuba yeyiphi na indlela, umhlaba uphulukene nendoda enetalente kwaye ulunge kakhulu. Abafoti banesipho esikhethekileyo esivumela ukuba silibone ilizwe ngamehlo abo.
Inqaku le-Indianapolis Star
Igalari yeefoto zikaMpozi kwi-IndyStar.com.
Iposi loqobo likaRuth Holladay
URuth Holladay Icandelo II
Nasi isikhumbuzo negalari eyamiswa ngabahlobo bakaMpozi
Ngokubuhlungu kukuba, IMySpace kaMpozi
8/18-i-Monitor, upapasho lwe-National Association of Black Journalists, ipapashe ingxelo namhlanje kwimagazini yayo. Jonga ikhonkco… http: //nabjconvention.org/2006/monitor/pdf/fri/NABJ81811.pdf
Uvelwano lwam luphuma kusapho lakwaMpozi, intombi, abahlobo, nabantu endisebenza nabo… kuquka bonke abasebenzi beThe Star. Yeyiphi ilahleko enkulu.
Ukuleqa umsila: IHarry Potter kunye noMsila omde
Jul 29, 2006 ngo-8: 28 PM
Esinye isahluko esibuhlungu kwibali esele lilusizi. Ndicinga ukuba xa umntu omncinci kangaka esweleka abantu bayazifumana izizathu okanye umntu oza kusola ngethemba lokuphinda alungise umhlaba kwakhona. Ngaphandle koko yinto engaqhelekanga kwaye eyoyikisayo.
Andililo igqwetha, kodwa ukuba akukho-911 mgaqo undibetha njengabom kunye nokuhlukumeza ngabom ngabaphathi. Nangona kungekho ndlela yokuthetha ukuba imizuzu eyongezelelekileyo ngeyisindisile uMpozi nje yinto enokwenzeka, enganyamezelekiyo ukuba kunjani.